Ngo-2012, umagazini ethandwa eshicilelwe simo abaphathi engcono. Emkhakheni "Okokhelekayo Inxanxathela» V salandelwa Dyukov Aleksandr Valerevich. Ake ukubazi naye njengoba abe umuntu ohlukile, umphathi phezulu isizukulwane omusha waseRussia.
Dyukov Aleksandr Valerevich - inhloko OAO "Gazprom Neft"
Yena - ongowokudabuka idolobha elihle ku iNeva. Alexander wazalwa ngo-December 13, 1967 Petersburg. Ngemva kokuphothula ngempumelelo esikoleni esiphakeme, wangenela Order of Lenin Leningrad shipbuilding Institute. Ngemva kokuphela imfundo ephakeme ngo-1991 u-Aleksandr Dyukov iqala umsebenzi wakhe lochwepheshe. Usebenza e-ubambisane "edolobheni langakini Sovex 'futhi sikhula unjiniyela letetayelekile letiya kumalunga Iphini likaMqondisi Jikelele. Ngesikhathi esifanayo ke okunye kuthuthukisa futhi kujulise ukukhulisa imfundo yabo, esihlanganisa umsebenzi ayeqhutshwa sikhungo. Ngo-2001, kokuba ngempumelelo izifundo zakhe IMISP, yena uthola MBA ethembisa.
Kuwufanele ethi ekuphileni kwakhe siqu njengoba izenzakalo usomabhizinisi eziningi ezithinta ukusebenza kanye nokusungulwa kukasomabhizinisi enjalo eyaziwa ngokuthi Dyukov Aleksandr Valerevich. Umkhaya kanye ukuphila okuphelele nomkakhe nezingane ezimbili esikhathini esidlule. Manje ukuphila kuka-Alexander ugcwele nezilingo ezintsha. Akusiyo imfihlo ukuthi manje Dyukov Aleksandr Valerevich futhi Sloutsker Olga baziswa ngokomthetho nobuhlobo babo. Kusukela kuleso sikhathi amacala ezehlukaniso nomkakhe baqala Dyukov Aleksandr Valerevich. Unkosikazi akazange aphikisane isicelo somyeni wakhe.
Track umlando Dyukova
umlando Alexander Dyukova unothile kakhulu ngoba sebeqedile izinyathelo eziningi eziyinkimbinkimbi isitebhisi umsebenzi ngempumelelo.
Kusukela ngo-1996, wahamba ukuthi asebenze Kuvaliwe Joint-Stock Inkampani "Petersburg Amafutha Terminal" esikhundleni Umqondisi Ezezimali. Njengoba wazibonakalisa kulesi sikhundla, Djukov uthola i-aphoyintimenti entsha esikhundleni sokuba umqondisi jikelele.
Ngo-1998, Dyukov Aleksandr Valerevich kakade ithatha isikhundla Umqondisi nezoMnotho at Vula Joint Stock Inkampani "Sea Port Petersburg" Alexander futhi kungakabiphi baba umqondisi-jikelele we ibhizinisi.
Phakathi nale nkathi a ukuhlala ngamafuphi njengalawa Alexander Dyukova ngaphansi kwesandla sakhe kwaba Alexei Miller, ngubani manje inhloko "Gazprom" futhi siqondise Alexander V .. Kusukela 2000, abaholi abasha abanamakhono ukunikela ukuba abe umeluleki oyinhloko, bese benza usihlalo "Petersburg Amafutha Terminal" futhi eBhodini Labaqondisi JSC "Rosneftebunker". wayephumelela futhi kuyasebenza yathela impela kuze 2003, ngokuhlanganisa izikhundla ezimbili. Futhi ngokuqinisekile nzima kakhulu.
izilingo Isikhathi ngokunqoba
Ekwenteni imisebenzi uMongameli inkampani "Sibur" futhi, kusukela ngo-July 2005, nguye umongameli we "AKS" Holding "," Phakathi neminyaka emithathu, kusukela ngo-February 2003, Dyukov Aleksandr Valerevich. Lesikhatsi lesi impumelelo Alexander V. lingachazwa ngokuthi yonke inkathi yokuhlolwa. Njengoba band eyinqaba inselele isithiyo, emele inkinga ekulinganiseni ezithile, hhayi kakhulu abahloniphekile yimpumelelo, inkampani ephethwe isakhiwo "Gazprom" futhi ukuphela kwalesi sakhiwo ezingeni of ukusebenza.
Kusukela inkampani "SIBUR" ukuze "Gazprom"
Kulokhu, Aleksandru Dyukovu kwadingeka ukuba ahole Petrochemical ebambe inkampani "Sibur". Le nhlangano isivele wachazwa ngokuthi amafa esicindezelekile futhi usesimweni esibi kakhulu. Ngemva Djukov wachitha ezinye izinyathelo lwenhlangano yokutholwa uchungechunge izinqumo kweqiniso futhi ezibalulekile ukhiye ekuphathweni Alexander V., hhayi kuphela ephethwe ekulinganiseni eliyifa eziyimbangela yalokhu, kodwa futhi yaba ibhizinisi yimpumelelo kakhulu, ngokuletha inzuzo enkulu.
Manje "Sibur Holding" - umholi igesi ukucutshungulwa kanye ukukhiqizwa kwemikhiqizo Petrochemical. Aleksandru Dyukovu kokhelo for the yimpumelelo futhi ethela sokunqoba macala kobuholi ingxenye enkulu Gazprom futhi sibukeka kahle. Yena uqokwa UMjaphethe kaMongameli JSC "Gazpromneft" Kusukela ngo-November 2006. Dyukov Aleksandr Valerevich ngoDisemba ngawo lowo nyaka kokuqokwa njengomholi we nkampani.
Kulokhu, oda RF Uhulumeni sangomhla 29 Okthoba, 2007 Alexander V. likhona Uhulumeni Commission, okuyinto ubheka umbuzo emkhakheni amafutha kanye namandla nokumbiwa isisekelo seensetjenziswa.
Ibhizinisi emkhakheni wezemidlalo
Ngo-2008, u-Alexander Dyukov, kuyathakazelisa ukuthi lithole eyengeziwe kanye FC "Zenit". Amabili nenkampani enkulu kunazo zonke yokugcina, OAO "Sibur Holding" futhi OAO "Gazprom", kuthiwa uxhasa iNeva FC "Zenit". Ngemva kwesikhathi okhethweni lokuqala, okungukuthi, ngo-2011, isivumelwano ne Dyukov ladluliselwa omunye umbono oneminyaka emihlanu. inkampani entsha "Gazpromneft-Aero" kwamiswa ngaphansi abanamakhono, isiqondiso sakhe esiqinile kakhulu. Ezweni lethu, umlando jet fuel ibhizinisi waqala kuwo.
Ukusebenzisa imishini yakamuva uwoyela, inkampani "Gazprom Neft" ithola jet fuel lwezinga eliphakeme kakhulu. Isimiso yokusetshenziswa ngokucophelela futhi enengqondo kwemithombo yemvelo sichichima umhlaba wethu ubulokhu ihlonishwe ngisho nemininingwane emincane.
Impumelelo "Gazprom" - umphumela ukuphathwa lochwepheshe
Siyabonga ekuholeni kwakhe manje "Gazpromneft" - lena umkhankaso esiqinile nge idumela elihle kakhulu. It - omunye uwoyela negesi izinkampani ngobukhulu Russian, okuyinto waziphatha uwoyela negesi isizinda, nokukhangiswa kwemikhiqizo kaphethiloli. manje "Gazpromneft" yethulwa umkhankaso omusha ukukhangisa ngaphansi kwesiqubulo esithi "Lwela enkulu", okuyinto washayelwa isimiso yayo eyinhloko ukuthuthukiswa ezinqala eminyakeni ezayo. sokunconywa Integral ekuthuthukiseni inkampani "Gazpromneft" fanele Aleksandru Dyukovu.
Ukukhetha ikona eliwusizo lokugezela